स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ९ अर्ब लगानी
बिक्रम थापा शुक्रवार, भदौ २०, २०७६, ०३:३७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रदान गर्दै आएको कोषले १० वर्षको अवधिमा ८ अरब ७९ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको हो ।
सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७०/७१ सम्ममा कोषले तीन अर्ब २४ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्ममा पाँच अरब ५४ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लगानी भएको सचिवालयको तथ्याङ्क छ । आव २०७५/०७६ मा एक अर्ब ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो भने सहकारी संस्थाहरुबाट ९६ करोड ९ लाख ६ हजार २५९ रुपैयाँ ऋण असुली भएको थियो ।
कोषले बैंकबाट चार प्रतिशतमा ऋण लिएर बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । बेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन र पुँजीको अभावबाट हुने विदेश पलायन रोक्न सरकारले यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो । कार्यक्रममार्फत प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ विनाधितो ऋण प्रदान गरिँदै आएको छ ।
कोषले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूलाई पाँच वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु प्रसाद गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले व्यक्ति तथा समूहलाई बढीमा तीन वर्षका लागि ऋण दिन्छन् । कोषको कार्यालय केन्द्रियस्तरमा मात्र भएकाले लगानी र अनुगमन कार्यमा ढिलाई हुने गरेको उनले बताए ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले निर्धारण गरेको किस्ताबन्दी अनुसार सावाँ र ब्याज समयमै तिर्ने ऋणीहरूलाई सम्पूर्ण ब्याजको ६० प्रतिशत कोषले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुरुप आव २०७५/७६ मा १४० वटा सहकारी संस्थाका ४ हजार १६७ जना व्यवसायीहरुलाई चार करोड ९ लाख २४ हजार ५४३ रुपैयाँ व्याज अनुदान दिएको कोषले जनाएको छ ।
व्यावसायिक खेती तथा पशुपक्षीपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग र अन्य व्यापार व्यवसाय, शहर बजार क्षेत्रमा रिक्सा, ठेलागाडा लगायतका स्वरोजगारमूलक, सेवामूलक व्यवसाय, परम्परागत सीपयुक्त व्यवसायलगायतका लागि कोषले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।
कोषले पर्यटन, होमस्टेसम्बन्धी व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमूलक परियोजना, उत्पादित क्षेत्रमानै खपत गर्ने परियोजना र एक गाउँ एक उत्पादनसम्बन्धी परियोजनाका साथै द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, अपाङ्गता, घाइते र शहीद परिवार, उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित तथा महिलाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने गर्दछ ।
वि.सं २०६५ सालमा पाँच लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । वर्षेनी ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य राखिएको स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्ममा एक लाख ९ हजार ७ सय एक जनाले तालिम लिइसकेका छन् भने, ६४ हजार ६ सय ८५ जना स्वरोजगार भएको कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा ६ हजार ३९८ जना महिला र ६ हजार ९४२ जना पुरुष गरी जम्मा १३ हजार ३४० जना स्वरोजगार भएका छन् ।
पिठ्युँ फर्काएर किन भाग्यो प्रहरी ?(भिडियो सहित) बुधवार, असार ४, २०७६, १३:५७:००
महानगरको नजरः चक्रपथ छेउछाउका अव्यवस्थित अटोग्यारेजमा चक्रपथको आसपासका स्वीकृति नलिएका र अव्यवस्थित ग्याारेजले सडकमा हिलो आउने गरेको छ । जसको कारणले सडकमा सधै हिलो भइरहने । दुईचार किलोमिटर हिलो छोद्दै हिड्छ । बाटो पीच गरेर मात्रै धूलो मुक्त नहुँदो रैछ । त्यस्ता ग्यारेजहरुलाई हटाउने कुरा भएको छ । मंगलवार, फाल्गुन २८, २०७५, १२:२६:००